Kitra U15 – «UFFOI 2019»: resy teo amin’ny manasa-dalana ny Barea U15 | NewsMada
Kitra U15 – «UFFOI 2019»: resy teo amin’ny manasa-dalana ny Barea U15
Nifarana, teo amin’ny lalao manasa-dalana, ny dian’ny Barea de Madagascar, sokajy U15, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina “UFFOI 2019”, taranja baolina kitra. Fihaonana, tanterahina any Maorisy. Resin’i Djibouti, tamin’ny isa mazava 3 no ho 1, ny katitakely malagasy, omaly talata. Lalao natao tao amin’ny kianja St François Xavier, Maorisy.
Raha ny fizotry ny lalao, nanohitra ary tena naneho ny fahaiza-manaony tanteraka ny tovolahikelin’ny Barea de Madagascar. Porofon’izany, nahatafiditra ny baolina voalohany ny Malagasy, tamin’ny alalan-dRanaivoarison, teo amin’ny minitra faha-16. Niezaka nanohitra avy eo ny Djibosianina, saingy tsy nety nahafaty mihitsy. Io isa tokana, 1 no ho 0 io, no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nanasahala ny isa kosa ry zareo Djibouti, teo amin’ny minitra faha-48. Baolina matin’i Ali Gaas Ahmed. Mbola nampian’i Omar Houssen indray izany teo amin’ny minitra faha-57, tamin’ny alalan’ny “penalty” tafidiny. Tsy nijanona teo fa nofaranan’i Moubarik Hassan tany amin’ny minitra faha-79. Hiady ny laharana fahatelo izany sisa ny Barea de Madagascar.